Koox dhallinyaro ah oo tabarucayaal ah oo Caruur ku tabaalaysan caasimadda Soomaaliya siinaya waxbarasho bilaash ah. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Koox dhallinyaro ah oo tabarucayaal ah oo Caruur ku tabaalaysan caasimadda Soomaaliya siinaya waxbarasho bilaash ah.
July 11, 2018 at 21:13 Koox dhallinyaro ah oo tabarucayaal ah oo Caruur ku tabaalaysan caasimadda Soomaaliya siinaya waxbarasho bilaash ah.2018-07-11T21:13:44+00:00 WARARKA SOOMAALIYA
Iyagoo qaadanaya waqti ay ka soo baxayaan waxbarashadooda, koox dhallinyaro ah oo tabarucayaal ah oo ku tabaalaysan caasimadda Soomaaliya ayaa siinaya waxbarasho bilaash ah oo loogu talagalay carruurta oo laga raray guryahooda dagaal iyo macaluul.
Todoba sano ka dib markii gaajada iyo cudurku uu dilo rubuc ka mid ah malaayiin qof, iyo ku dhexjirta fallaagada adag ee joogtada ah ee Soomaaliya, ayaa lagu magacaabaa xeryaha barokacayaasha ee Muqdisho. Tuulooyinkaas isku-dhafan ee hareeraha guryaha ah ee loogu talagalay dadka gurya la’aanta ah, oo loogu yeero “dadka gudaha ku barokacay” shaqaalaha gargaarka, ayaa isugu jira meelaha u dhaxeeya dhismayaasha iyo xaafadaha Muqdisho.
Waxay ka mid yihiin kuwa ugu dulqaadka badan: dhul aan jirin, dhul-beereed iyo rajo yar oo mustaqbalka carruurtooda ah. Laakiin bilawga qaar ka mid ah dadka magaalada ka mid ah ee aadka u faraxsan ayaa siinaya xirfadaha aasaasiga ah ee akhris-qorista iyo tirabarashada dhallinyarada. Inta badan tabaruceyaasha ayaa ah ardayda jaamacadaha maxalliga ah, sida Cabdirashiid Cabdullaahi, oo ka mid ah aasaasayaasha kooxda.
“Ka dib markii ay arkeen, waxna baranayeen, jiritaanka xarumo waxbarasho oo ay dowladdu maamusho oo loogu talagalay bulshooyinka saboolka ah, waxaan go’aansanay, sida tacliinta, si aan u caawino dadka baahan ee jooga barokacayaasha Muqdisho,” ayuu yiri 20-jir ardayga caafimaadka. “Wax kale oo aan u hayno dadkaan, marka laga reebo waqtigeena aan wax ku bareyno,” ayuu yiri.
Cabdullaahi waxa uu sheegay in 30 ka mid ah tabarucayaashu ay barayaan 600 oo arday oo da’doodu u dhaxayso lix illaa 15 ah afar xarumood oo ku yaalla degsiimooyinka aan rasmiga ahayn ee ku yaalla magaalada. “Wax waliba waa wax sahlan – qaar ka mid ah fasaladayada waxaa lagu qabtaa geed ama guryo fudud – laakiin waan ku faraxsanahay sababtoo ah niyadjabkayaga, iyo kuwa ardayda, waa ay sarreeyaan,” ayuu yiri.
“Dhammaan arrimahan waa ujeedada wanaagsan ee aynu dooneyno inaan isku keenno.” Waxbarashada, sida adeegyo kale oo gobolka oo dhan bixiya, ayaa la hakiyay tobannaan sano oo dagaal sokeeye. Inkastoo dugsiyada gaarka ah iyo kulliyadaha gaarka ah ay ku noolaanayaan Muqdisho, haddana waxay doorbidaan oo kaliya dhowr qof oo ka mid ah caajisnimada.
« Wararkii ugu dambeeyay saldhig Shabaab oo Duqeyn lala eegtay
“Waxaa ku guuleysan karnaa Champions League kadib imaatinka Cristiano Ronaldo”…. Alessandro Del Piero »